Famantarana 5 hahafantarana fa manana fiantsoana masina | TOKO VAVAKA
Home Fiainana araka an'Andriamanitra Famantarana 5 hahafantarana fa manana fiantsoana masina ianao
Androany izahay dia hampianatra ireo famantarana 5 hahafantatra fa manana antso masina ianao. Iray amin'ireo lahasa sarotra indrindra nefa mbola mahatanteraka ny asa fanompoana. Tahaka an'i Paul sy Barnabasy natokana ho an'ny asan'ny tompo ao amin'ny bokin'i Asan'ny Apôstôly 13:12 Ary raha nanompo ny Tompo sy nifady hanina izy, dia hoy ny Fanahy Masina: Atokàny ho ahy Barnabasy sy Saoly hanao ny asa izay niantsoako azy. Andriamanitra dia mbola nanokana olona sasany ary nanome azy ireo andraikitra masina hanao ny asan'ny fanompoana Jesosy Kristy.
Matetika aho no nandre olona maro nanontany hoe ahoana no ahafantarako fa miantso ahy hiasa amin'ny fanompoana Andriamanitra? Betsaka ny fomba na fambara mety ho hitanao rehefa manandrana miantso anao hanompo Andriamanitra. Na eo aza izany, alohan'ny hidirantsika amin'izany dia misy karazana fisainana tsy maintsy foanan'ny olona ny momba ireo lehilahy nantsoina ho amin'ny asa fanompoana. Ny finoan'ny olona maro fa ireo izay tafiditra ao amin'ny asan'ny tompo dia nantsoina ho amin'ny toe-javatra sarotra sy nandrava. Ny soratra masina dia milaza ao amin'ny bokin'i Izaia 45:19 Tsy tao amin'ny mangingina no nolazaiko tamin'ny tany mangingina; Izaho tsy nilaza tamin'ny taranak'i Jakôba hoe: «Katsaho foana aho; Izaho TOMPO dia milaza fahamarinana, milaza izay mahitsy. Andriamanitra tsy miantso ny olona ho ao anaty fahantrana na fahantrana, azo antoka fa manana drafitra tsara ho an'ny olona rehetra nantsoina hanao ny asan'Andriamanitra izy.
Fomba fijery iray izay nanakana ny olona maro tsy hamaly ny antson'Andriamanitra. Zavatra iray ihany no azo antoka, tsy hitovy intsony ny fiainana ary hiova ny zavatra. Misy sorona tsy maintsy aloan'ny olona toy izany amin'ny maha-oracle avy amin'Andriamanitra azy. Misy minisitera samihafa. Tsy izay rehetra manana fiantsoana masina no ho pastera fa tsy Mpaminany, evanjelistra na zavatra mitovy aminy. Ny bokin'i Efesianina 4:11 Ary nomeny ho apôstôly ny sasany; ary ny sasany, mpaminany; ary ny sasany dia evanjelista; ary ny sasany dia pastera sy mpampianatra; Ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asa fanompoana, ho fampandrosoana ny tenan'i Kristy. Voantso ho amin'ny asa fanompoana samihafa ny olona. Fahadisoan-kevitra ara-potopampianarana ny mieritreritra raha vao nantsoina ianao dia tokony ho mpitandrina. Mety nantsoin'Andriamanitra ianao hiasa amin'ny asan'ny mpaminany.
Na inona na inona minisitra niantsoan'Andriamanitra anao, dia mila famantarana tokoa ianao hahafantarana raha tena Andriamanitra no niantso. Tsy ny olona rehetra no hahita ilay famantarana hitan'i Mosesy rehefa niantso azy Andriamanitra hidina any Egypta sy hanafaka ny zanak Isreal amin'ny fanandevozana.
Ny sasany amin'ireo zavatra ho tsikaritrao rehefa manana antso masina dia misy:
Ny fomba na famantarana azo antoka indrindra izay hampandre anao raha manana antso masina ianao dia ny fanambarana. Ity karazana fanambarana ity dia tsy zava-nitranga izay naseho tamin'ny olona iray hafa. Andriamanitra mihitsy no hanambara ny tenanao aminao. Indraindray mety ny nahitanao ny tenanao tao anaty nofy niasa tamina fahaiza-manao izay tena hafa sy avo kokoa noho ny fahaizanao miasa amin'ny tena fiainana.
Indraindray ianao dia mety mahita ny tenanao mametra-tanana amin'ireo marary, manafaka ny olona amin'ny herin'ny fanandevozana miaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra mihitsy no afaka mitsidika anao amin'ny nofy amin'ny endrika anjely. Ny fanahin'Andriamanitra dia hilaza aminao ny zavatra tian'Andriamanitra hataonao sy ny fomba hanaovana izany.
Manana Fanomezana Manokana ianao
Tsy misy olona noforonina Andriamanitra izay tsy misy fanomezana. Namorona ny olona Andriamanitra ary nametraka zavatra mahavariana ho an'ny olona rehetra. Na izany aza, misy ny olona izay mihoatra ny voajanahary ny fanomezana. Mety hanana ny faminaniana, na fahitana ianao. Midika izany fa azonao atao ny manonona hetsika iray izay tsy tonga tamin'ny zava-misy ary afaka manana fahitana amin'ny zavatra mbola hitranga ianao.
Ny fanomezana an'ny olona sasany dia mety ho ilay teny. Eny ny fanahin'Andriamanitra dia tompon'andraikitra amin'ny fiteny. Na izany aza, ny olona sasany dia voatahy amin'ny teny noho ny hafa. Izy ireo dia voatahy amin'ny teny mandresy lahatra izay hahasarika ny sain'ny tsirairay. Ireo teny ireo dia tsy teny tononina fotsiny, fa mitondra hery sy afo. Rehefa voamarikao fa manao ny sasany amin'ireto zavatra tsara ireto ianao dia mety ho famantarana fa miantso anao Andriamanitra.
Indraindray, Andriamanitra dia miteny amin'ny alàlan'ny mpanompony. Indraindray ianao dia hahazo fanambarana momba ny tenanao. Ilay mpaminany na pastera dia hilaza aminao izao hoy ny Tompo Andriamanitra Tompon'ny maro: Izaho no nifidy anao hiasa ho ahy. Hiasa amin'ity haitao ity ianao. Tsy tokony ho reraka amin'ny feon'olona isika rehefa miteny amintsika izy ireo. Miasa amin'ny fomba mahagaga Andriamanitra. Ny zavatra tsara indrindra azontsika atao dia ny mivavaka mafy amin'Andriamanitra mba hahazoana fanamafisana ny fanambarana.
Betsaka ny olona no hilaza fa tsy tena misy io. Na misy na tsy misy indray, azoko antoka fa mbola miteny amin'ny olona Andriamanitra. Ny fanamasinana raha i Samoela ho amin'ny asa fanompoan'i mpaminany dia naorin 'ny feon' Andriamanitra mivantana iray. 1 Samoela 3: 5-10 Ary Jehovah niantso an'i Samoela. Ary hoy Samoela: Inty aho. Ary nihazakazaka nankany amin'i Ely izy ka nanao hoe: Inty aho; niantso ahy ianao. ” Fa hoy Ely: Tsy niantso aho; miverena mandry ihany. ” Dia lasa nandry izy. Ary Jehovah niantso hoe: Samoela indray! Ary nifoha Samoela ka nankeo amin'i Ely ary nanao hoe: Inty aho; niantso ahy ianao. ” “Anaka,” hoy i Eli, “Tsy niantso aho; miverena mandry ihany. ” Ary Samoela tsy mbola nahalala an'i Jehovah. Ary ny tenin'i Jehovah tsy mbola naseho azy. Ary Jehovah niantso an'i Samoela fanintelony; dia nifoha izy ka nankeo amin'i Ely ary nanao hoe: Inty aho; niantso ahy ianao. ” Ary fantatr'i Ely fa nantsoin'i Jehovah ny zaza. Ary hoy Ely tamin'i Samoela: Andeha mandry, ary raha miantso anao izy, dia ataovy hoe: Mitenena, Jehovah ô, fa mihaino ny ankizivavinao. Dia lasa nandry teo amin'ny toerany Samoela. Ary tonga NY TOMPO ka nijanona teo, dia niantso toy ny teo mandrakariva hoe: Ry Samoela! Samoela! ” Ary hoy Samoela: Mitenena, fa mihaino ny mpanomponao.
Rehefa maheno ny feon'ny Tompo miverimberina milaza aminao hanao zavatra ianao, dia famantarana lehibe izany fa miantso asa fanompoana Andriamanitra.
Manana ny karisma mpitarika ianao
Rehefa tsikaritrareo fa ny olona dia manaraka anao hatrany am-panajana ary manome anao andraikitra hitarika anao, dia marika tonga lafatra amin'ny fiantsoan'Andriamanitra anao hanompo.
Ny olona voaantso ho amin'ny minisitera dia mpitarika lehilahy. Eo am-pelatanany ny famonjena sy ny fitomboan'ny olona ara-panahy. Andriamanitra dia tsy hiantso nonentity fotsiny.
Previous lahatsoratra10 Andininy ao amin'ny Baiboly ho famindram-po sy famelan-keloka
Next lahatsoratraTeboka vavaka ho an'ny fahagagana sy zava-mahatalanjona
Vavaka hanoherana ny filan'ny nofo
Ny vavaka fanafahana dia manohitra ireo mpaka an-keriny amin'ny fanambadiana